Runtii ma Warbaahin "Bulshadeed" baa? | Martech Zone
Talaado, Juun 19, 2007 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Waxaan hayaa 36 saaxiibo Facebook, 122 isku xirnaanta LinkedIn, 178 Xubno aniga MyBlogLog bulshada, dhowr iyo toban daraasad MySpace, oo ku saabsan 60 saaxiibo on Yahoo! Messenger Instant, 20 on AOL Instant Messenger iyo weheliya 951 xiriir Plaxo! Aniguba waan socdaa Ryze, MyColts.net, Jaiku, Twitter oo waxaan ka akhriyey illaa iyo toban boggag internet ah (oo ka mid ah 300 ama wixii la mid ah quudinta kale ee aan ururiyo oo aan dib u eego).
Waan ka xishoonayaa inaan dadka u sheego inaan haysto saddex xisaab internet Internet midna aan lahayn. Telefoonkaygu wuu kuxiranyahay, gurigayguna wuu xidhanyahay, waxaanan haystaa akoon T-Mobile ah oo laga helo Starbucks iyo Border (halkaas oo aan do runti la kulan saaxiibbadaa). Sidoo kale shaqada ayaan ku hayaa, dabcan. Waad qosli kartaa, laakiin fursadaha ayaa ah in lagugu xidhi doono isla heer sannado yar gudahood, sidoo kale. Waxay unoqotaa inay ahaato shaqadayda iyo hiwaayadayda.
Marka la eego dhamaan baraha bulshada ee aan kamid ahay, runti ma waxaan ahay bulshada?
Waxaan maalin dhaweyd lahadlayay qaar kamid ah xirfadlayaal suuq geyn aan faa'iido doon ahayn oo waxaan isku dayay inaan sharaxo Life labaad iyaga. Iskuday inaad sharraxdo Nolosha Labaad si aad u daabacdo xirfadlayaasha suuqgeynta warbaahinta mana caawin kartid laakiin waxaad heli kartaa xoogaa yar oo cufan iyo cunno-cunno ah Ugu dambeyntii qof ayaa yiri:
“Tani iima muuqato mid bulsheed aniga. Waxay u egtahay mid lidi ku ah bulshada. ”
Xusuusin Shakhsiyeed: Nolosha Labaad hubaal waa heer uber-geekdom oo aanan ku dadaalin inaan helo. Waxaan haystaa caqabado igu filan Noloshayda Koowaad intii aan ka shaqeyn lahaa mid labaad.
Waxaan u maleynayaa inay dhimatay. Tani bulsho maahan. Bulshadu waxay u baahan tahay wax ka badan daawashada, akhriska ama dhageysiga… waxaa jira aqoonsi luuqadda jidhka ee dadka, soo jiidashada, taabashada, urta… si fudud indhahooda ugu eegaan.
Mararka qaarkood markaan si qoto dheer ugu hawlan yahay shaqadayda, gabadhaydu waxay fuulaysaa kombuyuutarka iga dambeeya (macno ahaan 6 fuudh) iyo IM aniga… “Nabad Aabe! lol ”(waa 13 jir). Had iyo jeer waan soo jeedsadaa oo qosol ayaan bilaabayaa… macnaheedu waa inaan waqti dheer ku jiray kumbuyuutarka oo aan u baahanahay inaan xoogaa waqti ku qaato kormeeraha. Mahadsanid, iyadu waxay isku fidin doontaa kursigeyga waxayna ku dhufan doontaa meel iga baxsan illaa aan ka fogaado laptop-ka. Nasiib ayaan u leeyahay in qof i daryeela igu filan oo aan taas sameeyo.
2000, a daanyeer gacanta ku maamusho internetka. Hadda waxaa jira xitaa bilow, oo la yiraahdo numenta, kaas oo ka shaqeynaya sidii loo waafajin lahaa caqliga macmalka ah iyo kan aadanaha.
Tani waxay bilaabeysaa inay i xasuusiso reer Telosiiyadii dhacdadii ugu horeysay ee Star Trek. Waxay ahaayeen nacasyo foolxun oo leh madax dufan weyn oo dadka ku hayn doona maxbuus iyagoo ku abuuraya dhalanteed madaxdooda si toos ah. (Ii sheeg inaad taas xasuusato) dhacdo, "Qafis". Waxay ahayd pre-Shatner xitaa! Duuliyaha ugu qaalisan NBC).
Waxaan kaliya ku xirnaan jirnay shaqada, markaa guriga, hada taleefankeena gacanta… maskaxdu runtii ma tan xigta? Xitaa ma waxaan ku lahaan doonnaa nolol nooc kasta ah oo ka baxsan internetka? Waxay leedahay nooc cabsi ah, maahan?
Waa hubaal, haddii aan maskaxda ku xiri karno internetka, ka fikir uun sida ugu dhakhsaha badan ee aan u qori karno una diri karno koodh. Waxaan dhisi lahaa beer horumarineed oo qasab ku leh kafee iyo pizza la shiiday adoo adeegsanaya tuubooyinka caloosha oo aan dhisi karo Hal dhibic Shan Nolol. (Meel u dhexeysa Nolosha Koowaad iyo Labaad).
Uma muuqato mid bulsheed aniga, sidoo kale. Waxaan ubaahanahay inaan waxbadan kasoo baxo.
PS: Maxaad u maleyneysaa in koontada maskaxda ee 'Brain' Net ay shaqeyn doonto?
Jun 19, 2007 at 9: 36 PM
Waqtigani ma yahay waqti xun oo aan kuu sheego inaad ka maqnayd riwaayad weyn oo ka dhacday Lawn-ka habeenkii jimcaha, ama wakhti fiican oo aan ku xasuusiyo in joogitaankaaga la seegay? Nasiib wacan marmar xayiraaddaada. Si aad iyo aad u wanaagsan ayay ii adeegtay. Waxaa laga yaabaa inaan haysto aqoon yar laakiin waxaan xaqiiqdii dareemayaa inaan aad ugu xirnahay dadka.
Jun 19, 2007 at 10: 00 PM
Ka maqnaanshaha riwaayadda jimcaha ayaa dhab ahaantii dhiirrigelisay qoraalkan, Julie! 🙂
Jun 20, 2007 at 3: 40 PM
Demi taleefankaaga waqti ka waqti.
Demi emaylka waqti ka waqti.
Tag oo arag buuraha iyo kaymaha iyo badda!
Looma baahna Nolol Labaad, maya, thx!
Waxaan haystaa tikniyoolajiyad igu filan nolosha koowaad hadda! 🙂